Ibiza - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuhamba
I-Ibiza ingesinye seziqhingi ezinhlanu eziqhingini zaseBalearic ezithola izivakashi eziningi ngonyaka. Futhi akuyona into engaphansi: amabhishi alo amakristalu, impilo yawo yasebusuku, kanye nemisebenzi ehlukahlukene ayinikeza izivakashi zayo ngokungangabazeki iyakhanga. Ngaphezu kwalokho, isimo sezulu simnene unyaka wonke, okusho ukuthi, yize kunesidingo sokuzivikela kancane ebusika, ufuna ngempela ukuhamba emigwaqweni yakhona.
Noma ngubani ofuna ukuya kule ndawo enhle uzothola ipharadesi, cishe kube sengathi uphelelwe iphupho. Kunamakhona amangalisayo emhlabeni wonke, kepha i-Ibiza ingesinye seziqhingi ezinenhlanhla, enamanzi ancintisana ngobuhle kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo nolwandle lwaseCaribbean.
Kulokhu kufanele sengeze la ukudla okumnandi okwenziwe ekhaya lokho kulungiswa ezindaweni zokudla nezindawo zokudlela ezahlukahlukene ukwaziswa kakhulu ngabasebenzisi be-TripAdvisor. Unganqikazi ukuzama isobho se-Ibizan garlic noma isosi yendabuko yabalimi, eyokugcina ilungiselelwe ikakhulukazi emikhosini ekhethekile, njengoKhisimusi.
Ngakho-ke, ulindeni ukuvakashela i-Ibiza? Lapha uzokwazi ukuthola lonke ulwazi ukuze ube nohambo olungenakulibaleka. Ungaphuthelwa.
Yini ongayibona e-Ibiza
Por USusana Garcia kwenza Izinyanga ze-11 .
I-Ibiza isiqhingi esingeziQhingi zeBalearic futhi ngokungangabazeki singesinye sezidume kakhulu. Okuvelele ...
Izungezwe yimvelo endaweni engenamadolobha amancane, iCala Salada itholakala, enye yamakhava amahle kakhulu futhi avakashelwe kakhulu ...
UCala Xarraca, ikona elihle e-Ibiza
Por UMariela Carril kwenza iminyaka 2 .
I-Ibiza ingesinye seziQhingi zeBalearic esaziwa ngokuba ngenye yezindawo ezinhle zokuvakasha eYurophu ...
Yini ongayibona eSan Antonio, e-Ibiza
Por USusana Garcia kwenza iminyaka 2 .
Idolobha laseSan Antonio, elaziwa nangokuthi iSan Antonio Abad noma iSant Antony de Portmany. Leli dolobha lase-Ibiza ...
Por Maria kwenza iminyaka 3 .
Por UCarmen Guillen kwenza iminyaka 4 .
Sonke siyazi ukuthi uma silinda isikhathi eside ukwenza ukubhuka kwethu ngamaholide ehlobo, kubiza kakhulu, ...
Por USusana Garcia kwenza iminyaka 5 .
I-Ibiza isiqhingi esidume ngamaphathi aso ehlobo, ama-nightclub aso amakhulu kanye nempilo yasebusuku encane, kepha lesi siqhingi ...
ICala Salada neCala Saladeta e-Ibiza
Por Amabhishi nezindawo zokungcebeleka kwenza iminyaka 8 .
I-Ibiza ingenye yezindawo zasehlobo ezinkulu kakhulu emhlabeni, lapho usuku ludlula kokunye kokuningi kwalo ...
I-Es Cavallet, ibhishi lezitabane elisezingeni eliphakeme e-Ibiza
Yize kufanele kuvunyelwane ukuthi empeleni kuyibhishi lama-nudist elivulekele wonke umphakathi, iqiniso ...
Isiqhingi saseHvar, i-Ibiza yaseCroatia.
Por eTraveling kwenza iminyaka 10 .
Kuthathwa njengomagazini i-'Forbes 'njengesinye seziqhingi eziheha kakhulu, kanye neHawaii neBahamas, isiqhingi ...